I-iPhone Caps High 6S 2200mAh 0 Ibhethri Yesiyingi China Manufacturer
Incazelo:Ikhono eliphezulu eliphezulu le-iPhone 6S 2200mAh,Ikhono eliphezulu le-iPhone 6S Ibhethri,IPhone 6S 2200mAhthri
Home > Imikhiqizo > I-iPhone Battery High Capacity > IPhone 6 / 6S Ikhono eliphezulu leBhetri > I-iPhone Caps High 6S 2200mAh 0 Ibhethri Yesiyingi
Apple iPhone 6S High Capacity Li-ion ibhetri 2200mAh
Iyahambisana ne-iPhone 6S A1633, A1688, A1700. Sicela uqinisekise imodeli yakho ye-iPhone kusuka kukhava yefoni emuva, ayihambisani ne-iPhone 6 noma engu-7 . I-APACITY HIGH: I-iPhone Caps High 6S 2200mAh.Landa uhlelo lokusebenza "AIDA64 APP", umsizi we-Ace noma usebenzise imishini yokuhlola ukuze uhlole amandla wangempela.Insiza ethile ayikwazi ukufunda ikhono lethu eliphezulu. Wonke ama-iPhone 6S we-Brand New High Capacity Battery Replacement ihlolwe ngumhloli ochwepheshe ngaphansi kwamazinga okulawula izinga eliphezulu, ngokusebenzisa i-FCC, CE ne-RoHS eqinisekisiwe. Umjikelezo we-100% 0 awuvuselelanga isikhathi sokujikeleza ngomshini. I-iPhone 6S Plus Ukushintshwa Kwebhethri nge-Chip Okuthuthukisiwe: Ukugwema u-virtual ugesi kanye nedivayisi esebenza kancane kancane. Ukuphila kwebhethri kunamaphesenti angaba ngu-30 kunebhethri evamile, izinga lokuguqulwa kwamandla liphakeme kunezingu-95%.
① Ukuhlanganisa i-cell ye- ectrode indlebe ② Ukuvikelwa ibhodi laser welding ③ Silk-screen ukunyathelisa
Ukuthumela okusheshayo ngokuqondile kusuka ku Factory:
Ngezinye izikhathi amabhethri alahlekelwa ukusebenza ngaphezu kokuphila kwabo, ngisho nalapho engasetshenzisiwe. Abathungisi abaningi nabathengisi bagcina amabhethri abo esitokisini isikhathi eside ngaphambi kokuba bathengiswe. I-Aokal.com iqinisekisa ukuthi ibhethri elayishiwe ingathunyelwa
ngqo emva kokukhiqiza ngokusebenza kanye nabakhiqizi. Ngakho ungaqiniseka ukuthi uzothola ibhethri entsha yekhwalithi ephezulu !
Izigaba zomkhiqizo : I-iPhone Battery High Capacity > IPhone 6 / 6S Ikhono eliphezulu leBhetri
I-iPhone Caps High 6S 2200mAh 0 Ibhethri Yesiyingi Xhumana Nanje
I-iPhone 6 Ikhono eliphakeme le-2200mAh Li-ion Ukushintshwa kwebhethri Xhumana Nanje
Ikhono eliphezulu eliphezulu le-iPhone 6S 2200mAh Ikhono eliphezulu le-iPhone 6S Ibhethri IPhone 6S 2200mAhthri Ikhono eliphezulu eliphezulu le-iPhone 6Plus 3410mAh Ikhono eliphezulu eliphezulu le-iPhone 6Plus Ibhetri IPhone 6 Ikhono eliphezulu eliphezulu 2200mAh Ikhono eliphezulu le-iPhone 6Plus / 6S Plus ibhetri Ibhetri ephezulu ye-iPhone 6 / 6S